Basy eny amin’ny jiolahy : Mpitandro filaminana no mpamatsy ireo olon-dratsy – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 12:50
Ampaany amin'ireo basy sarona teny amin'ny jiolahy.
Accueil/Fanadihadiana Manokana/Basy eny amin’ny jiolahy : Mpitandro filaminana no mpamatsy ireo olon-dratsy
Basy eny amin’ny jiolahy : Mpitandro filaminana no mpamatsy ireo olon-dratsy
Miverina indray ny tsy fandriampahalemana amin’ny Faritra maro. Isan’ny fositra mahatonga ny tsy fandriampahalemana eny anivom-piarahamonina, ny fiparitahan’ny basy eny amin’ireo olon-dratsy. Miezaka mamerina ny fandriampahalemana amin’ny laoniny ny mpitandro filaminana, izay matetika amoizana aina mihitsy. Ahitana basy mahery vaika hatrany sarona tany amin’ireo olon-dratsy, izay matetika avy any amin’ny mpitandro filaminana ny sasany. Fanadihadiana…
Rado Harivelo 17 septembre 2020
Ampahany amin’ireo basy sarona teny amin’ny jiolahy.
Mahazo vahana ny tsy fandriampahalemana, ary matetika ny fanafihana mitranga na an-tanàn-dehibe na any ambanivohitra dia ahitana basy na fitaovam-piadiana mahery vaika hatrany. Ohatra amin’izany ity tratra tany Ambatomainty, Ikalamavony izay nahatrarana basy mahery vaika Kalachnikov iray sy “grenade” iray ary bala folo, ny 8 septambra teo. Araka ny fanadihadiana natao, mazàna mahavoatonontonona ny mpitandro filaminana ny fiparitahan’ireny basy ireny. Fantatra fa misy ny mivarotra basy sy mampanofa basy ireo mpitandro filaminana na eto an-drenivohitra na any ambanivohitra. Fitaovam-piadiana ana mpitandro filaminana rahateo ireny tratra ireny.
Fantatra izao fa mahavidy basy mahery vaika ny dahalo toy ny MAS 36, izay any amin’ny 3 tapitrisa Ariary any. Araka ny sokajin’ny basy ny bala izay misy 7 arivo Ariary ka hatramin’ny 2 alina Ariary ny iray. Misy ireo basy vidina amin’ny mpitandro filaminana tany amin’ny Faritr’Ikalamavony sy Isandra: Kalachnikov novidiana 3 000 000 Ariary ny iray, ny balany 10 000 Ariary ny iray ; Baîkal 12 000 Ariary ny bala iray ; Chevrotine 20 000 Ariary ny iray; ny balana basim-borona 10 000 Ariary ny iray.
Basy tsy manara-dalàna maherin’ny 2000 isa no tafaverina
Basy sy grenady azo tany amin’ny dahalo.
Na izany aza misy ny ezaka ataon’ny mpitandro filaminana amin’ny ady amin’ny fiparitahan’ny basy sy bala, amin’ny fanentanana famerenana ireny fitaovana ireny any amin’ny Faritra. Na ny teto an-drenivohitra aza, efa nisy fanapotehana basy imasom-bahoaka teny Analakely ny taona 2019. Nilaza ny kaomandin’ny Fari-piadidian’ ny zandarmariam-pirenena Fianarantsoa, Jly Tsiketa Bernard « fa nisy ny faharesen-dahatra hiova ho amin’ny fitondran-tena tsara ny famerenana basy mahery vaika sy ny vita gasy ataon’ny dahalo na ny olona mitazona basy noho ny fiarovan-tena”.
Taorian’ny fandalovan’ny Praiminisitra Tany Fianarantsoa ka nitsidihany ny Distrikan’Isandra, nametrahany ny asa fampandriampahalemana dia azo lazaina fa miverina ny fandriampahalemana eto amin’ny Faritra. Ankehitriny dia nisy ny paik’ady natao hamerenana ireo basy tsy manara-dalàna amin’ny alalan’ny famerenana izany an-tsitrapo.
Vokatr’izany dia basy tsy manara-dalàna maherin’ny 2000 isa no tafaverina eny am-pelatanan’ny tompon’andraiki-panjakana ary mifanindran-dalana amin’izany ny famatsiana zezika sy masomboly tantsaha sy ireo namerina basy mba hahomby amin’ny fihariana maha tantsaha.
Araka ny fanazavan’ny tomponandraikitra eo anivon’ny mpitandro filaminana hatrany, matetika basy very nandritra ny krizy nifanesy teto amintsika ireo eny am-pelatanan’ny olon-dratsy. Mbola maro ireo no niparitaka any, kanefa tsy azo lavina koa ny fisian’ny basy vaovao aty aoriana amidy na ahofa. Mety misy koa ny trafikana basy ? Araka ny vaovao navoakan’ny Agence France Press (AFP 29 aogositra 2018, 19h00) dia anisan’ny firenena ahitana trafikam-basy eto. Voalaza tamin’izany fa nisy ny fiaramanidina feno fitaovam-piadiana avy aty Madagasikara nankany Afrika Atsimo. Voalaza fa ana Rosianina io, ary tokony nihazo an’i Lagos, Nigéria. Ny fanadihadiana nataon’ny mpitandro filaminana any Afrika Atsimo nilaza fa mety nandalo nijanona taty amintsika io. Mety nisy koa ny sambo nitatitra ireo taty Madagasikara, ary azo heverina ny nametrahana maro tamin’ireo teto amintsika. Mbola anatin’ny fanamarinana avokoa anefa izany.
Mirongo basy mahery vaika hatrany ireo olon-dratsy
Ireo basy naverina tany amin’ny distrikan’Ikalamavony.
Nirefodrefotra ny basy tao amin’ny fokontany Andohamandry, fokontany Marovato, kaominina ambanivohitra Mangamila, distrikan’Anjozorobe, afakomaly, tokony ho tamin’ny 5 ora sy fahefany hariva. Nisy ny fampitam-baovao avy amin’ny olona tsara sitrapo fa misy jiolahy ikoizana antsoina hoe Falibe miaraka amin’ireo namany mikononkonona fanafihana mitam-basy ao an-toerana. Raikitra, araka izany, ny fidinana ifotony nataon’ny zandary miisa enina avy amin’ny kaomandin’ny borigadin’i Sadabe. Vantany vao nahita ireo mpitandro filaminana ireo olon-dratsy, dia nitifitra avy hatrany.
Tsy nanaiky lembenana ireo zandary ka avy hatrany dia namaly bontany. Naharitra minitra vitsy ny fifampitifirana teo amin’ny roa tonta. Vokany, lavon’ny bala ilay jiolahy ikoizana ary atahorana fatratra antsoina hoe Falibe. Rehefa notomorina, basy mahery vaika sokajy voalohany MAS 1936 mitondra ny laharana FG 66482 miaraka amin’ny tranom-bala miisa telo amin’ny 7,5 mm. Nogiazana avy hatrany moa ity basy mahery vaika ity. Nentina tao amin’ny CSBII Sadabe kosa, ny fatin’ilay jiolahy. Mitohy, araka izany, ny fikarohana ny naman’ireo jiolahy mahery vaika antsoina hoe Falibe ity.
Mahasahy mifanandrina amin’ny mpitandro filaminana
Ny alin’ny alatsinainy lasa teo, nahitana trangana halatr’omby tao Andamoty, fokontany Mahazoarivo, kaominina ambanivohitra Beraketa, Distrikan’i Bekily. Vao nandre io tranga io ny Zandary ao Beraketa, nahetsika avy hatrany ny kizo rehetra ao Farantsa sy Ambalasaraka ary Andranotoho, samy hisakana ny fandalovan´ireo omby ireo tsy hiditra any Andriry. Raikitra ny fifampitifirana tamin’ireo dahalo ampolony nirongo basy sy fitaovam-piadiana hafa tao. Naharitra fotoana lavalava ny fifampitifirana teo amin’ny roa tonta, saingy tsy naharesy tosika ny dahalo ka vaky nandositra. Vokatr’izany, azo avokoa ny omby miisa 70 izay nalain´ny dahalo, fa ny 12 kosa, novonoin´ireo malaso. Mahasahy mifanandrina tanteraka amin’ny Zandary ireo dahalo noho ny fananan’izy ireo basy eny am-pelatanany. Noho ny fahaiza-manaon’ny Zandary, dia resy tosika ireo dahalo. Natolotra ny tompony ny omby ary velom-pisaorana ny Fokonolona manodidina nohon´ny hakingan’ireo zandary nanatanteraka ny asany. Tsy misy rahateo, aina nafoy na ny fokonolona na avy amin’ny mpitandro filaminana.
Basy marobe no sarona tany Ikalamavony
Ho an’ny faritanin’i Fianarantsoa, nahazoana vokatra tsara hatrany ny fahatrarana basy tany amin’ireo dahalo na naverina. Vao ny talata lasa teo, vokatry ny fanentanana nataon’ny Zana-tobim-paritry ny Zandary tao Solila, tao anatin’ny fokontany Ambalamahasoa sy Tanamarina, ao anatin’ny Kaominina ambanivohitra Tanamarina Sakay, distrikan’i Ikalamavony, basy miisa 40 vita gasy k any 23 miendrika basy lava raha 17 kosa, basy poleta. Fanolorana an-tsitrapo avy amin’ny olona tsara sitrapo no niverenan’ireo basy ireo, araka ny tatitry Kaomandin’ny Vondron-tobim-paritra Matsiatra Ambony.
Ireo basy azo nandritra ny fanentanana tao Matsiatra Ambony.
Nahitam-pahombiazana hatrany ny hetsika ho famerenana basy tsy manara-dalàna, izay notarihin’ny Governoran’ny Faritra Matsiatra Ambony, miara-miasa amin’ny OMC, ireo Ben’ny Tanàna sy Sefo Fokontany, ny 5 septambra lasa teo. Basy tsy manara-dalàna miisa 34 indray no azo tao amin’ny Kaominina Iavinomby Vohibola, Distrikan’Isandra. Hita taratra ny fandriampahalemana ankehitriny, mihary ao anatin’ny fitoniana ireo mpamboly sy mpiompy, manatanteraka ny asany am-pilaminana ireo mpiasam-panjakana sy ireo seha-pampandrosoana samihafa any an-toerana, raha ny fanazavana.